အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ‌ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး…….. – Shwe Naung
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ‌ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
N N | October 6, 2021 | Celebrity | No Comments
photo model ခင်ရတီသင်း က တော့ ယခု မှာ အသည်းယား လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေ တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခပ် သွားစေ ခဲ့ပါ တယ်။
သူမ ရဲ့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါး တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း နေ ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေ ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် ကြွေလောက်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ Tik Tok ဆော့ထား တဲ့ ခင်ရတီသင်း ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါတယ်။
ယခု အခါမှာ လည်း ခါးတို လေးတွေ နဲ့ မိမိုက်လွန်း တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ကပြထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး တွေကို တင်ပေး လာတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာ အောင်မြင်လျက် ရှိ နေတဲ့ photo model တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေး တွေ နဲ့ social media လောက မှာ ခေတ်စား နေပြီး မြန်မာ ဝတ်စုံ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် ကို တင်ပေး လေ့ရှိ တဲ့ ခင်ရတီသင်း ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး တွေ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိ ပြီး ချစ်စရော ကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ရော မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကိုပါ အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင်ခဲ့ တဲ့ သူမ ကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိသတ် တွေရဲ့ ရှေ့ ကို ချပြလေ့ရှိ ပါ တယ်။
ဖွေးဥ‌နုနေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်‌လေးများ…….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ရွှေရင်မွှာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……….
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
ချောကလျာရဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ပုံရိပ်လေးများ…